စိတ်ဝင်စားဖွယ်အကောင်းဆုံး အင်ဒိုနီးရှား ထရိတ်ဒါများတွေ့ဆုံပွဲ
သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လွတ်လပ်မှုနှင့် အောင်မြင်သော အင်ဒိုနီးရှားကုန်သည်မျုားတွေ့ဆုံပွဲ နှင့် ပြည်တွင်းကုန်သည်များနှင့် ပါတနာများတွေ့ဆုံပွဲကို သြဂုတ်လ ၂၄ ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်. အဲဒီတွေ့ဆုံပွဲကို ဘာလီ, လက်ဂီယမ်မှာရှိတဲ့ အလွန်တရာ ခမ်းနားကြီးကျယ်လှသော ကြယ် ၅ ပွင့်အဆင့်ရှိ ကျောက်တုံးဟိုတယ်ကြီးမှာ ကျင်းပခဲ့ပါတယ်, အင်ဒိုနီးရှားတစ်နိုင်ငံလုံးကFBS ကုန်သည်များ နှင့် ပါတနာများ ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စွာစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ကြတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်.
ဒါဟာ သံသယကင်းကင်းနဲ့ အထင်ကြီးစရာအကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ FBS ရဲ့ အရေးပါတဲ့ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလို့ ကောင်းကောင်းပြောနိုင်ပါတယ်: ဧည့်သည်တော်ကြီးများဟာ လူမှုကွန်ယက်များ၊လိုက်ဖ်ရှိုးများ၊ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်း၊ဟာသရုပ်ပြောင်များဆွဲခြင်း၊အရသာရှိတဲ့အစားအစာများနှင့် အောင်မြင်တဲ့ ကမ္ပဏီကြီးနဲ့ အတူ ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြပါတယ်.
အင်ဒိုနီးရှားရဲ့ လူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်တဲ့ Rio Febrian, Rossa, and Bunga Citra Lestari တို့က အစီအစဉ်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပြီး ပရိတ်သတ်နှင့် ဆယ်ဖီအတူရိုက်ခြင်း, သီချင်းအတူဆိုခြင်း နှင့် နည်းပညာမြင့်ပစ္စည်း ၁၄ ခုကိုမဲဖောက်ပေးပြီး အနိုင်ရရှိသူများကို ရှာဖွေဖို့ ကူညီ ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်.
အဓိကဆုမဲကြီးဖြစ်တဲ့ သစ်လွင်တောက်ပတဲ့ Mazda Hoki ကားသစ်ကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့သူ မကာဆာမှ Mr. Karim Abidin ကိုယ်တိုင် တွေ့ ဆုံပွဲကိုလာပြီး ကားဆုအတွက် ခိုင်မာတဲ့ကတိကိုပေးခဲ့ပါတယ်. အခုနောက်ထပ် FBS ကတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အိပ်မက်တွေ တကယ်ဖြစ်လာ ဖို့ စတင်လိုက်ပါပြီ. ကျနော်တို့ဟာ မကြာခင်မှာ Mr. Abidin ရဲ့ Mazda ကားသစ်ကြီးကို သူ့ရဲ့မွေးရပ်မြေ မကာဆာမြို့ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ မောင်းပို့ပေးတော်မှာပါ. အသေးစိတ်ကို စောင့်ကြည့်ပါ!
နောင်တစ်ချိန်မှာ အင်ဒိုနီးရှားက ကုန်သည်တွေနဲ့ပါတနာတွေလို ကံကောင်းခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေရဖို့ ကျနော်တို့နဲ့ ဆက်သွယ်လိုက်ပါ
သတိပြုရန်! ထရိတ်ဒါပါတီပွဲများတက်ရောက်ရန် လက်မှတ်တောင်းခံခြင်းကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၇က်နေ့အထိလက်ခံနေပါသည်